Lammummaa Ameerikaa argachuuf biyyattii keessatti dhalachuun murteessaa ta'uu hin qabu jedhu Kaadhimamtoonni Republikaanota Presidentummaa
Hagayya 31, 2015
Torbanneen darban keessa dorgomaa presidentummaa paartii republikaanotaa kan ta’an Donal Trump imaammata isaanii kan immigration efa ennaa taasisan dhimmi falmisiisaa ta’e tokkos waliin dhiyaatee jira.
Mucaan US keessatti dhalate ykn dhalatte tokko mirga lammummaa Ameerikaa haa qabaatu ykn haa qabattu jedhu jijjiiruun fedha jechuu isaanii ture. Ameerikaa keessatti dhalachuu dhaan lammii biyyattii ta’uun haa hafu isa jedhu imaammata duula filannoo isaanii keessa galchaniiru.
Trump dhimma kana irratti qofaa isaanii mirti. Dorgomtoonni republikaanotaa ka birooon illee ijoollee namoonni gara seeraan alaa Ameerikaa seenanii godhatan lammii Ameerikaa akka hin taane barbaadu.
Seerri sunis keeyata 14ffaa jedhama. Waggoota 150 dura bara 1865 keessa garbummaan jiraataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afriikaa garbummaa jala jiraataa turan lammummaa Ameerikaa argachuuf walabummaan isaanii akka eegamu yaadamee kan raggaasisame ture.
Donald Trump ijoollee akkasiitiin ijoollee lammii Ameerikaa argachuuf yaadamanii dhalatan ittiin jedhu. seer asana jijjiiruun salphaa akka hin ta’in Trump ni hubatu. Sababiin isaas seerri sun seera Ameerikaa keeyata 14ffaa irra taa’ee waan jiruuf jecha. Kanaaf jedhan Trump yeroo hagamii iyyuu yoo fudhate heera sana fooyyessuun barbaachisaa dha.
Duulli na filadhaa Donald Trump immigration ilaalchisee mul’inatti ennaa lafa kaa’u namoonni seeraan ala US seenan lammummaa argachuun isaanii namoonni itti dabalaa seeraan ala daangaa ce’anii gara Ameerikaa akka dhufan jajjabeessaa jira jedhan.
Suzanna Shery Universitii Nashville, Tennesseetti argamu keessaatti profesora seeraa ti. US keessatti heera biyyaa fooyessuuf malli lama jiraachuu dubbatu. Tokko mana murtii muummicha seerri inni duraan ba’e dogoggora jedhanii amansiisuu ennaa ta’u kaan immoo seera fooyyee qabu baasuu dha.
Seera fooyyessuu immoo sagalee mana marii bakka bu’oota uummataa afur keessaa sadiitu barbaachisa. Mana marii murtii uummataa fi mana maree bakka buootaan jechuu dha. Keeyyati 14ffaan sun egaa akkas jedha. US keessatti kanneen dhalatanii fi biyya ka biroo keessatti dhalatanii lammummaa Ameerikaa kanneen argatan lammii Ameerikaa akkasumas kutaa biyyattii keessa mirga jiraachuu qabu jedha.
Seenaan isaa boodatti deebisamee ennaa ilaalamu seerri sun kan ba’e lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afriikaa lammii Ameerikaa akka ta’an, kuktaaleen isaan keessa jiraatanis lammii ta’uu isaanii akka mirkaneessan gochuuf jecha. Kanaafis sababaan kutaaleen US hagi tokko yeroo sana garbummaa labsii dhaan hin morminu seera jedhan waan qabaniif jecha.
Kaayyoon heera US inni ijoon mirga namaa eegsisuu dha. Seerawwan ol aanoo kana keessaa tokko seerri mirga namaa murteesse tokko qofa. Sunis gurgurtaa dhugaatii alkoolii kan ittisu ture. Kunis waggoota 25 booda jijjiirame.
Seerri dorgomaa paartii republikaanotaa Donald Trumpiin dhiyaate kana qormaata ka birootu isa eega. Yoo hojii irra oole jechuu dha. Manni maree bakka bu’ota uummataa Ameerikaa nama fedheef lammummaa kennuu danda’a. garuu lammummaa nama irraa mulquuf heeraan aangoon hin kennamneef.
Kanaaf jecha seerri Trump aangoo kongresiin qabu heera biyyaa keessatti akka fooyyessamu gaafata. Seerri Trump qormaata ka biroon isa mudatu, seerri sun fooyyeffamnaan lammiiwwan Ameerikaa eeyama konkolaataa oofuu argachuuf akkasumas lakkoobsa ittiin adda baasan kan SSN argachuuf ragaa lammummaa maatiiwwan isaanii eenyuun akka ta’an beeksisuu qabu jechuu dhaan university Emory irraa Polly Price ibsaniiru.
Sanatti dabaluu dhaanis US keessatti kanneen dhalatan lammii biyya isa kami ta’u? namoota lamummaa hin qabaanne ta’uun isaanii hin hafu jedhu Polly-n.
Dorgomaa paartii republikaanotaa ka biroon Jeff Bush immo namoota seeraan alaa US seenan ijoollee isaan Ameerikaa keessatti godhatan jedhanii dubbachuu isaaniin qeeqa hedduutu irratti dhiyaate.
Kadhimamtoonni garee republikaanotaa hedduun asitti dhalachuu dhaan lammummaa argamu morumuu dhaan gara Donald Trump goraniiru. Senetora kutaa South Carolina irraa Lindsety Graham, bulchaa Louisiana Bobby Jindal, senator kutaa Kentucky Rand Poul fi Senetara Pennsylvania duraanii Rick Santorum Ameerikaa keessatti dhalachuu dhaan lammummaa argamu martinuun isaanii mormaniiru.
Dorgomtoonni garee Republikaanotaa hagi tokko kan akka Carly Fiorina immoo maaloo waan hin taanetti yeroo keenya balleessuu irra dhimma bu’aa buusu dhimmootii Siyasaa irratti maal ta’a yoo mari’anne jedhan. Innumaa iyyuu seera immigratioin bifa qabate fooyyessuu irratti fuuleffachuu qabna jedhan.
Kan xumura torban darbee ifa ta’e galmeen imaammata duula filannoo Trump akka mul’isutti waggaa waggaatti maatiiwwan kuma 400 karaa seeraan alaa US seenan ijoollee godhatu. Jeffery Passel waaltaa qorannaa Pew keessatti qorataa ennaa ta’an yeroo ammaa eeyyama seeraatiin ala maatiiwwan US seenan ijoolleen godhatan waggaa waggaatti kuma 300 ta’uu ibsaniiru.